Fatana horonan-taratasy, firaka cast S ...
Grate bar sy rindrina sisiny, izahay ...
CRISHER LINERS Ball Mill Li ...
Atsofohy vy vy vy, mitafy ...
Steel Shield Tube Tube, Hanger Strip
1. Fomba fanombohana: fametahana na fanariana
2. Fitaovana: SS310S, SS309S, SS304, SS321 ary sns.
Ny ampinga fantsom-boaloboka dia ampiasaina amin'ny lafiny avaratra amin'ny fantsom-panafanana toa ny superheater, ny fitaovana fampiarana ary ny fantsom-pamokarana rano ary koa ny mpankafy volom-borona. Ny asany lehibe indrindra dia ny fiarovana ny faran'ny rivotra amin'ny fantsom-boiler, mampihena mitafy fantsona ary mampitombo ny androm-piainan'ny fantsom-panafanana. Tube Shield dia fitaovana manokana ho an'ny boiler, izay matetika ampiasaina amin'ny boiler power station, fa tsy dia ampiasaina amin'ny boiler kely, ary ampiasaina koa amin'ny indostrian'ny simika arina.
Roll Alloy Guide Rollers, torolalana / kodiarana
Casting Process: casting bobongolo marina
Fanodinana machining: ivon-toeran'ny milina CNC
Fitaovana: Cr, Mo, V, W, Cu
Fantsom-panafody / harona fitsaboana hafanana, fitoeran'ny lafaoro fametahana
1. Dingana fandefasana: casting casting
2. Kilasy vy: arak'izay takinao
3. Fandeferana dimensional an'ny mpilalao: DIN EN ISO 8062-3 kilasy DCTG8
4. Fandeferana Geometrika an'ny mpilalao: DIN EN ISO 8062 - kilasy GCTG 5
Takelaka fanadiovana Pulp Mill
1. Cast Process: fanariana fampiasam-bola na famolavolana marina.
2. Machining: Toy ny sary na santionanao.
Fako fanosorana fako famonoana fatana famonoana fatana
1. Cast Process: casting bobongolo marina
2. Kilasy vy: GX130CrSi29 (1.4777) (Mety ho toy ny takiana aminao koa)
5. Fampiharana: fatana Incinerator.
Atsipazo ny vy vy, manaova ampahany amin'ny fako mankany amin'ny lafaoro angovo
XTJ dia orinasa mpamokatra vy faratampony izay manana traikefa 12 taona mahery amin'ny fanamboarana Grate Bar. Izahay dia namatsy Bar Grate ho an'ny firenena maro manerantany. Mpanamboatra OEM izahay. Mila mandefa ny sarinao sy ny zavatra takinao fotsiny ianao. Azo omena anay izy hanome anao vokatra tonga lafatra sy serivisy tsara indrindra.
LINERS CRUSHER Ball Liners
XTJ dia mpamatsy lohan'ny mpilalao, ary namorona vahaolana ho an'ny OEM sy ny mpandraharaha crusher aorinan'ny varotra. Manana traikefa 12 taona mahery izahay tamin'ny famatsiana ireo kojakoja fanamontsanana amin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany sy fanodinana mineraly, fako amin'ireo zavamaniry angovo, vy, simenitra, mpanjifan'ny taratasy.
Grates mitsangatsangana sy gadona rojo ary mitafy takelaka amin'ny lapoaly grama
1. Fampandehanana casting: fanariana volavolan-trondro.
2. Kilasy vy: 1.4777 1.4848 1.4837.
3. Fandeferana dimensional an'ny mpilalao: DIN EN ISO 8062-3 kilasy DCTG8.
4. Fandeferana Geometrika an'ny mpilalao: DIN EN ISO 8062 - kilasy GCTG 5.
5. Fampiharana: mitafy faritra amin'ny lafaoro grate.
Grate bar sy rindrin'ny sisiny, mitafy faritra amin'ny fiara paleta sy fiara sinter / pellet
Izahay no mpamatsy fiara lehibe pallet sy mpanamboatra fiara sinter ary ireo orinasa lehibe vy. Miaraka amin'ny traikefa fanariana 10 taona mahery, ireo ampahany mahatohitra novokarintsika ireo dia manana fananana mekanika tsara sy lafika mihantona tonga lafatra.
Kitapo fandrendrehana, firaka vy vita amin'ny firaka, fantsom-pahazavana
Manome metaly ferrous marobe izahay ho an'ny akanjo fitotoan'ny vy izay manome tanjaka fanamiana avo lenta amin'ny lafiny rehetra. Izahay dia nandatsaka vy famafazana, ADI, CADI, Ni-Resist, Ni-Hard, ary grafité compact, vy vy koa ary metaly maro hafa.